Inta jeer ee user ah u baahan tahay si ay u gudbiyaan ama dhoofin playlist a sabab u ahaa xaqiiqada ah in ay u baahan tahay wadaagista dadka kale si ay marnaba u leeyihiin in ay maraan habka isku mashquulsan ee raadinta iyo ururinta songs sida user ku sameeyey. Haddii playlist ah ayaa lagu soo ururiyey hayo maanka wax ku faanaan ku gaar ah markaa waa hubaal matalno oo suuqa kala iibsiga user dadka kale si aad u hubiso in ay sidoo kale ka ciyaari kara iyo waxa ay ku raaxaystaan ​​oo ku beegnaa ah in uu yahay ee ku sifayn la mid ah. The playlist Lugood waxaa sidoo kale loo wareejiyaa qalab kale si loo hubiyo in waxa la ilaaliyey oo ammaan ah oo qofna waxay marin u heli karaan sababo la xiriira ururinta cabsi badan heesaha in ay yihiin meeshaasna ay ku yaalliin. Tutorial loo qoray hayo in aragtida baahida iyo shuruudaha isticmaala marka ay timaado in la dhoofiyo playlist Lugood.
Part1: Dhoofinta Lugood playlist la Music Faylal ay la Lugood
Part2: Dhoofinta Playlists ka Lugood qoraalka
Part3: Playlists dhoofinta Lugood si iPhone / iPad / iPod
Part4: Arrimaha la kala iibsiga iyo TunesGo
Part1.Export Lugood playlist la Music Faylal ay la Lugood
Waa habka fudud oo u baahan in user a si kaliya noqon user wanaagsan ee barnaamijka software Lugood iyo inta kale oo dhan waa la sameeyo oo bilig bilig ah isha. Si aad u fudud habka user ay u baahan tahay in la hubiyo in tallaabooyinka ay halkan soo bandhigay tutorial waxaa raacay talaabo talaabo ah si loo hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira iyo user ay sii raaxaystaan ​​playlists Lugood in uu abuuray. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka qaar ka mid ah oo ku lug leh arrintan la xiriira fudud:
i. Tallaabada kowaad user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in software Lugood la bilaabay:
ii. Laga soo bilaabo fadhiga hadda Lugood waxaa lagula talinayaa in ay guji doorasho playlist si loo hubiyo in hannaanka sii:
iii. On guddiga software bidix user ay u baahan tahay in guji playlist in ay tahay in la dhoofiyo:
iv. Hadda user ay u baahan tahay in la raaco File Jidka> Library
. v Markaas doorasho playlist dhoofiyo waa inay riixi sidii loo iftiimiyay:
vi. In file cusub oo laga furay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in nooca faylka la doorto sida faylasha XML ka dhanka ah "Save sida nooc". Tani waxay sidoo kale buuxin doona habka Dhameystiran:
Part2.Export Playlists ka Lugood qoraalka
Habka Lugood qoraalka badbaadiyo waa cadaalad ah oo fudud oo ah waa wax inta badan la mid ah mid ka mid ah oo uu soo kor ku xusan. Faraqa kaliya waa in la hubiyo in Save the sida nooca la bedelo si qoraal tallaabadii u dambaysay. Waayo, user ee sahlo nidaamka waxaa si kastaba ha ahaatee soo noqnoqda in ay ka fogaadaan wax kasta oo dhib iyo wada qasnayd;
i. Burcad Lugood,
ii. Riix playlist sudhaan ugu weyn marka fadhiga hadda la ciyaaray:
iii. Playlist The in la dhoofiyo waa in la riixi ee guddiga bidix ee Lugood ah:
iv. Riix File> Library> playlist dhoofinta
v. From suuqa kala socda in kor booda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in "Save sida nooc" waxaa loo doortay in ay qoraalka. Haddii qaab la dalbaday by nidaamka UTF ka -8 waa in la soo xulay. Hit badbaadin iyo dhamayso:
Part3.Export Lugood Playlists si iPhone / iPad / iPod
Waa habka ugu fudud taas oo ka dhigaysa fudud nolosha dadka isticmaala badan oo halkan ay xaliyo arrintan by fudud xira qalabka kombuyuutarka iyo wareejinta content in ay iDevice cusub sida ay u baahan yihiin. Si aad uga dhigto fudud tutorial hadda ifin doontaa dadka isticmaala ku saabsan dhoofinta playlist Lugood si iPhone iyo iDevices kale si sahlan sida ku qanacsan tahay:
i. User waxay u baahan tahay in lagu xiro qalab Apple ay ku computer dhex cable USB ah u bilowdo hawsha:
ii. Marka la sameeyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in iExplorer waxaa markaas bilaabay on Mac ama PC wax kasta oo ku sifayn ee mashiinka waa:
iii. IExplorer waa ogaado qalabka iyo muujin doonaa waxyaabaha ay. Si aad u aragto music user ay u baahan tahay in guji music ah ee guddiga bidix ka dibna playlist ku habboon:
iv. Hadda user ay u baahan tahay in la raaco Transfer> Bedelka playlist dhan Jidka Lugood hore u socda si loo hubiyo in hab-socodka la sii habsami ah oo aan ka kaaftoomi kasta oo:
v. Si aad u buuxiso habka user u baahan yahay in la xiro iyo la bilaabi software Lugood ka dibna si loo hubiyo in qalab bartilmaameed ku xiran PC isku mid ah iyo Lugood waxaa synced la si playlist cusub waxaa loo wareejiyay qalab cusub oo aan arin kasta.
Qaybta 4. Arrimaha la kala iibsiga iyo TunesGo
Mararka markii user ku wareejinaya playlist u iDevices kale playlist hore la isla tirtiray. Waa wax walwal badan user a sabab u ahaa xaqiiqada ah in qof kasta uu doonayo in uu sii playlist hore in ay meel asalka ah. Si aad u hubiso in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin waxaa lagula talinayaa in ay soo baxdo iyo rakibi TunesGo taas oo ah barnaamijka cajiib ah ee ay soo Wondershare ah. Si loo hubiyo in wixii kaloo la gaari karo haddii aan arrinta wax user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa lagu dabakho ay PC ee kala ah ama Mac si aad u hubiso in arrinta la xalin:
i. Barnaamijku waa in la soo bixi www.wondershare.com/tunesgo/ sida version ugu dambeeyay wax walba waa in ay taageeraan baahida loo qabo in dadka isticmaala ee. Marka waxaa la soo bixi user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in uu bilaabay si interface ugu weyn ee u muuqataa,
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in ay ku xidhmaan iDevice la computer iyadoo la kaashanayo cable in ay timaado koox ka:
iii. User ayaa markaas u baahan yahay in wax miiran dari sare ee suuqa kala barnaamijka sida ugu dhakhsaha badan warbaahinta la ogaado gal qalabka:
iv. Dhoofinta Smart in Lugood waxaa markaas in la riixi si loo hubiyo in warbaahinta la synced la software Lugood ah:
v. Marka la sameeyo user in ay computer ka soo lifaaqi kartaa iDevice bartilmaameedka mar kale iyo in la hubiyo in warbaahinta dhoofiyo Lugood waxaa synced leh qalabka si aad samaysay shaqada.
> Resource > Lugood > Sida loo dhoofiyo Lugood playlist la Music Files